Dhaqaalaha iyo Argagisada | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Axmed Yuusuf Xassan — February 14, 2020
Soddonkii sanno ee u dambeeyey dunidu waxa ay wajahaysey halista argagixisooyinka, horumarka tignoolajiyadda waxaa la kordhiyey khasaaraha weerrarada argagixisooyinka, laakiin sooyaalka ururrada argagixisadu way ka durugsan tahay xilligaas.
Ururkii ugu horreeyey ee argagixisinimo loo aqoonsan yahay waxa uu ahaa dagaalyahannadii Yuhuudda ee iska caabbinta kula jiray Boqortooyadii Roomanka (AD 66 –70) ee “Zealots of Judea”. Ururkaas ayaa isu beddelay argagixiso iyaga oo wata magaca Sicarii oo la micno ah “dagger men” “raggii toorreyda”. Ereyga “terrorism” oo asalkiisu Latin yahay oo la micno ah argagixin ama baqdin gelin waxaa markii ugu horraysey la adeegsaday sannadihii 1793-1794 ee xilligii “Reign of Terror” ee taageerayaashii Kacaankii Faransiisku ay laayeen kummanaan dad ah, hal sanno gudahood.
Argagixintu waa weerraro lagu bartilmaansado shacab aan waxba galabsan, si ay u muujiyaan awooddooda iyo in ay cidda ka soo horjeedda u baqdin geliyaan. Mararka qaar dowladaha ayaa noqda argagixiso oo geysta ficillo dadqalnimo ah! Si ay shacabka u xukumaan uguna abuuraan baqdin badan, iyaga oo beegsanaya dad aan waxba galabsan.
Kacaankii Faransiiska ee 1793-dii ayaa loo aqoonsan yahay noocan aragagixiso-dowladeed in ay dhacday. Badanaa xukunnada keligiitaliyaha ah ayaa adeegsada si ay dadkooda u maamulaan. Waxaa xusid mudan in noocan argagixisinimo kamid ahi uu ka duwan yahay argagixisooyinka dowladuhu maalgeliyaan, si ay qalalaase uga abuuraan waddamo kale iyaga oo ujeeddooyin badan ka leh. Argagixisadu waxa ay yeelan karaan, ujeeddo siyaasadeed, diineed, bulsheed iyo dhaqaale. Waxaana dhacda in laba qolo oo iska soo horjeeda ay isu adeegsadaan eraygaas si u samaystaan taageero amase u wiiqaan awoodda kuwa ka soo horjeeda.
Waana sababta aysan u jirin hal qeexitaan oo la isla waafaqsan yahay oo la isku raacay. Laakiin aqoonyahannada Maraykanka ayaa 1970-kii waxa ay kala saar saareen noocyada argagixiso ee ugu waaweyn, iyada oo ay jiri karaan kuwo kale misana noocyada ugu caansan waxa aynnu ku soo koobi karnaa lix nooc:
Burburkii dowladdii Soomaaliya, dalku waxa uu gacanta u galay jabhado ay hoggaaminayaan dagaal-oogayaal midba mid ka soo horjeeda oo is haya, isna dagaalsan salkana ku haya qabiil. Jabhadahaasi waxa ay geysteen tacaddiyo badan iyaga oo dil, dhac iyo kufsi geysanaya. Hammigooda koowaad iyo shayga keliya ee ay ka midaysnaayeen waxa uu ahaa xasuuqa iyo waxyeelaynta dad aan hubaysanayn, isna difaaci karin oo maxas ah.
Haba yaraatee ma jirin, han iyo himilo siyaasadeed oo u diyaarsanaa oo ay doonayeen in ay dalka ku maamulaan, haddii Siyaad Barre kursiga laga kiciyo – keligiitaliye dalka haystey 21-sanno oo dalku ku jiray heehaab aan la garanayn jiho dalku hayo.
Al-Shabaab, oo la micno ah “dhallinyaro” waxa ay Soomaaliya ka dagaalamayeen ilaa 2007 iyaga oo sheegatay weerraro dalka iyo dibadiisa ay ku qaadeen. Waxa ayna maamulaan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya qaybo ka mid ah; inkasta oo dhul badan laga xorreeyey misana weli waxa ay maamulaan dhul balaadhan.
Argagixisadu waxa ay leedahay saamayn: dhaqaale iyo mid bulsheed. Dhaqaalaha Soomaaliya oo aan cago adag ku taagnayn, dowlad hagtana aan haysan – ilaa hadda waaxda gaarka loo leeyahay ayaa ka shaqaysa dalka taas oo xumaan iyo samaan labadaba wadata. Ayaa argagixisadu ka dillaacday dalka, sidaasna waxa aynnu ku noqonnay dhibbanaha koowaad ee halista argagixisada ee dhinac dhaqaale iyo mid bulsheed; waxa aynnu uga nugul nahay dal kasta oo adduunka ku yaalla, sababtoo ah waxa Soomaaliya u raaca mushkilado badan oo muddo is biirsanayey.
Argagixisadu waxa ay waxyeelaysaa oo naafaysaa ilaha dhaqaale ee dalka iyada si dadban ama si toosa u weerrarta. Soomaaliya, mid ka mid ah waddamada ugu faqiirsan dunida iyo mid ka mid ah waddamada colaadaha ugu muddo dheeri saameeyeen.
Haddii aynnu mid mid u dul istaagno argagixisadu waxa ay curyaamisaa ugu horraynta: kaabayaasha dhaqaale ee dalka; iskuullo, cisbitaallo, goobo ganacsi iyo waddooyin. Waxaa hoos-u-dhac iyo horumar la’aani ku yimaaddaa tayada iyo tirada waxbarashada iyada oo hoos u dhigaysa isdiiwaangelinta ardayda taas oo saamayn aan wanaagsanayn ku leh kobaca dhaqaalaha. Mar labaadka, waxa ay xaddidaan dhaqdhaqaaqa ganacsi.
Qaraxyada ay adeegsadaan kooxahaasi, waxaa waxyeelo ka soo gaadhaa ganacsiyo badan oo laga yaabo in aan dib danbe loo furin.
Ugu danbaynna kolka ay isbiirsadaan dhibaatooyinkaas badani waxa ay dad badan ku qasabtaa in ay dalka iskaga cararaan oo dal kale nolol u raadsadaan. Sida aynnu hore u soo sheegnayna dadku waa mashiinka dhaqaajiya dhaqaalaha. Waana tiirka koowaad ee haddii horumar nooca uu doono ha ahaadee la doonayo lagamamaarmaanka noqonaya. Tallaabadan keliya kama dhalato in dadku ka hayaamaan dalka e, waxaa sidoo kale guura dhaqaalaha (Collier et al., 2003, p. 15). Hantida ugu badan ee Soomaalida maanta waxa ay taallaa, waddamo kale, Kiiniya ha ugu badato e.
Dagaallada oo dhami nooca ay doonaan ha ahaadaane (dagaallo sokeeye, mid diineed iyo mid dowlado u dhexeeya) waxa ay dhaawac daran u geystaan kobaca dhaqaale iyaga oo leh saamaynahaas aynnu soo sheegnay, waxaa ugu saamayn yar ka dalalka u dhexeeya. Soomaaliya ilaa intii ay xornimada qaadatay ilaa1960-kii waxaa u kala danbeeyey saddexdaas nooc ee dagaal oo mid kasta dhabarjab ku ahaa bulsho ahaan, dhaqaale ahaan iyo dal ahaanba. Dagaal diineedka ayaa ugu dambeeyey oo dhowr iyo tobankii sanno ee ugu danbeeyey Soomaaliya ku jirtay.
Waddama dhaqaale ahaan faqiirka ah ee colaaduhu ragaadiyeen ee Soomaaliya kowga ka tahay, waxaa kaalin firfircoon ku leh deeqaha caalamiga ah, waxaa ku tiirsan kaalmada shisheeyaha dad badan oo Soomaali ah in kasta dhinac togan iyo dhinac tabanba yeelanayaan laakiin, dal Soomaaliya oo kale ah oo habayaraatee aysan jirin dowlad ka masuula dadka iyo dalkaba oo muwaadinku haysan aasaaskii nolosha sida: amni, cunto iyo hoy. Waa u muhim u ah deeqaha caalamiga ah, si ay ugu yaraan noloshooda u badbaadiyaan.
Kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya ka dagaalamaa, waxa ay is hortaagaan in dadkaa jilicsan deeqda la gaadhsiiyo sidoo kale argagixisadu waxa ay walaac ku abuurtaa waddama bixiya deeqaha iyaga oo ka baqaya in ay gacanta u gasho kooxaha dagaallamaya.
W/Q : Axmed Yuusuf Xassan
Tell : 252-634765429
Tags: Dhaqaalaha iyo Argagisada
Next post Maxaad Ka Taqanaa Cuduradada Beerka Weyneyo?
Previous post Waa Maxay Maalinta Jaceylka Adduunka?